भोटिङ लाइन बन्द, कसले पाए होला सर्वाधिक भोट ? – Everest Dainik – News from Nepal
भोटिङ लाइन बन्द, कसले पाए होला सर्वाधिक भोट ?
काठमाडौं, पुष ६ । नेपाल आइडल सिजन–२ को ‘भोटिङ लाइन’ बन्द भएको छ । आज साँझ पाँच बजेसम्मपछि‘भोटिङ लाइन’ बन्द भएको हो । यो पटक एक हप्ताका लागि ‘भोटिङ लाइन’ खुला गरिएको थियो ।
फिनालेका लागि एक हप्तासम्म खुला गरिएको भोटिङबाट आज एकजना आइडल घोषित हुने छन् । आइडलको फाइनलमा रवि ओड बिक्रम बराल, अस्मिता अधिकारी र सुमित पाठक पुगेका छन् । यो पटकको ‘गान्ड फिनाले’ ललितपुर स्थित नेपाल इन्जिनियरिङ क्याम्पस पुल्चोकमा हुने छ ।